नखाउँ भने बाबाजीको शिकार, खाउँ भने एमसिसीको अनुहार ! « Gajureal
प्रकाशित मिति: ७ मंसिर २०७८, मंगलवार १७:३२
ईतिहासतिर आँखाको गेडी सोझ्याउनेलाई थाहै होला, बाईबल लिएर पस्नेले कहाँ कहाँ के के गरे ! तराजु लिएर पस्नेले कता कता कस्तो कस्तो गरे ! पतंजलि र पित वस्त्रधारीका नाममा हाम्रो आयूर्वेद, हाम्रा जडीबुटी, हाम्रा बैध्य, कबिराज र बहुमूल्य जमिनहरु कसरी सिन्कीको मोलमा सिद्धिदैछन्, सिध्याईदैछन !
आज त यहाँ तुलशी र घ्यूकुमारी रोपिएला तर कालान्तरमा त्यहाँबाट खनिज समेत रित्याइनेछ । यो छेत्रीय साम्राज्यवादको भतखौरे हो । “बा” भन्दा रिसाउनेहरु झन् डवल बा जोडिएर बनेको “बाबा” को लगौँटी समाएर ढाडमुनि पिङ्ग खेल्दै महात्माको अबैध ब्यापारमा समेत ऐक्यबद्धता जनाएछन् !
भारतीय पतंजलि चुर्णले लट्ठिएका त्रिपूरा गठबन्धनले त त्यो गर्यो नै । यो पनि MCC भन्दा कम छैन। अचम्म त के छ भने; होईन, कहाँ गए के दर्जनौं पटकका हाम्रा अनसनकारी ? कहाँ गए के आलोचनात्मक चेत राख्ने हाम्रा बौद्धिक, विष्लेषक,बिचारकहरु!
कहाँ गए हाम्रा खबरदारी गर्ने मिडिया र मिडियाकर्मीहरु ? खोई हाम्रा हरेक गलतका बिरुद्ध अभियान चलाउने अभियन्ताहरु ? गाउँलेले बास माग्दा गोली खाए तर बाबा लाई त फेरी जे आवस्यक परेनि दिने रे नि त ! के कपाल भांती र अनुलोमविलोम गरेपछि नियममै नभएका मिडिया संचालन गर्न पाईन्छ ?